Fantatrao ve fa ny safidy ny karazana fifandraisana an-tserasera dia afaka milaza betsaka momba ny toetrany
Mba hazavao ny fahasamihafana eo amin’ny karazana fomba fijery izao tontolo izao, ny psikology efa fantatra efatra karazana olona: sofina, visual, kinesthetic, nomerika toetra. Ankehitriny fandaharana ho an’ny niady hevitra an-tserasera, firesahana amin’ny izay dia tsy midika ihany ny fifandraisana, no manome fahafahana ho an’ny kanto maneho hevitra ny vahoaka ny karazana rehetra.»Hahita Italia»dia iray amin’ireo fampiharana izay nampiasa ny aterineto ny fifandraisana amin’ny sofina sy ny kinesthetic, hita maso sy nomerika toetra.
Online fifandraisana ho an’ny sofina mpianatra sy ny sary mpianatra
Ho an’ny sofina mpianatra no tena mahazo aina amin ny feo ny fifandraisana. Olona an’ny karazana ity, dia tsara mandray ny vaovao amin’ny alalan’ny nandre: ireo tsarovy tsara sy ny marina kokoa dia maneho inona ny loharanom-baovao nilaza tamin’ny feo. Na dia amin’ny fifandraisana an-tserasera ao amin’ny lahatsoratra iray amin’ny chat ny sofina dia miseho, ohatra, ireo fanamarihana:»Hey»,»Te-hilaza hoe»,»no lazaiko.».
Sary, kosa, mianatra tsara indrindra amin’ny masony. Ny haavon’ny am-bava ny sary miseho amin’ny teny toy ny»Hahita»,»tsikaritro(a)»,»raha ny hevitro manokana»,»Mila maneho izany.»Mazava ho azy, ny sary dia mora kokoa ny mampiasa ny fandaharana ho an’ny Lahatsary firesahana rehefa miresaka an-tserasera. Nahita ny endrika sy fihetsika ny mpandahateny, sary mpianatra azy ireo hahatakatra tsara kokoa sy hahazoana tsara kokoa ny fihetseham-po avy amin’ny fifandraisana.
Ho an’ny karazana toetra ho amin’ny fanapahan-kevitra tsara mba handamina ny aterineto ny fihaonana mampiasa ny karajia fandaharana»Mampiaraka any Italia.»Ny sofina mpianatra dia mankasitraka ny fahafahana miresaka an-tserasera amin’ny alalan’ny microphone. Ny sary dia azo antoka fa toy ny fahafahana mampiasa ny»Hahita Italia»ho toy ny fandaharana ho an’ny Lahatsary firesahana amin’ny.
Toy kinesthetic nomerika sy ireo olona manambara ny tenany izy ao amin’ny chat
Kinesthetic (kinesthetic) olona izay mahafantatra izao tontolo izao amin’ny alalan’ny mikasika, mikasika. Nomerika toetra kokoa ny mitady ny lojika ny fahatakarana ny zava-misy izy ireo; maniry ny hahazo fanazavana be dia be alohan’ny hanaovana safidy. Na dia eo aza izany, kinesthetic sy nomerika toetra mampiasa ny karajia mifandray matetika araka ny hita maso sy ny sofina.
Ny haavon’ny am-bava, kinestetic matetika kokoa noho ny hafa mampiasa izany ho toy ny»mafana»,»fanahy», ny»fahazavana».
Ny fanambarana ho toy ny fanehoana an-tsary, matetika feno sary
Toy izany ny firesahana amin’ny fandaharana, toy ny»hihaona ao Italia», mety hahaliana ny kinestetika ny safidy hanampy sary ao amin’ny lahatsoratra amin’ny chat. Rehefa afaka rehetra, izany dia mamela Ginestet mba hizara amin’ny hafa ny olona ny ampahany amin’ny izao tontolo izao, na dia nomerika iray. Izany no azo atao fa»ny Traikefa Italia»ho mahaliana ny kinesthetic toetra toy ny fandaharana ho an’ny lahatsary fifandraisana.
Nomerika toetra tia manorina fifandraisana mirindra sy miankina amin’ny zava-misy, ny toerana tena fampidirana teny»noho izany»,»araka ny fahafantarako azy.»Ho an’ny digitalb fotsiny hafatra izay midika be lojika fandresen-dahatra mora kokoa ny Haneho izany amin’ny teny. Na izany aza, amin’ny chat online chat lahatsoratra tsotra, tsy ho ela nomerika dia afaka ny hampiasa ny fanampin-maneho hevitra dia midika hoe: ohatra, ny famindrana antontan-taratasy na fampisehoana sary ao amin’ny chat.
Toy izany safidy hahafahan’ny nomerika toetra mba hanohanana ny toerana sy hahazo mpikambana ao ambonin ny sary
← Tia Mampiaraka
Chat Mampiaraka →